M/weyne ku xigeenka Puntland oo sheegay in Golaha Iskaashiga waqtigooda uu dhamaaday… – Hagaag.com
M/weyne ku xigeenka Puntland oo sheegay in Golaha Iskaashiga waqtigooda uu dhamaaday…
Posted on 29 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweyne kuxigeenka Puntland C/xakiin C/llaahi Cumar Cameey ayaa weerar afka ah ku qaaday Golaha Iskaashiga maamul goboleedyada, isagoo ku eedeeyay in aysan dooneyn in Soomaaliya ay mid noqoto.
Wareysi uu siiyay mid ka mid ah Telefishinada maxaliga ayuu sheegay in Golaha Iskaashiga uu waqtigooda dhamaaday, isla markaana ku soo hareen xubno kooban, kaddib markii ay ka baxeen Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed.
“Haraadi baa ku soo haray, nimankan la baxay Golaha Iskaashiga, waqtigooda waa sii dhamaanayaa, shalay markii ay is magacaabayeen iyo maanta isku mid ma ahan, Hirshabeelle horay uga baxday, Shariifkii waa kii is casilay, nimanka hada ku soo haray laftigooda doorasho ayaa ku soo wajahan”ayuu yiri Madaxweyne kuxigeenka Puntland C/xakiin Camey.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland C/xakiin Camey ayaa inta badan dhaliili jiray Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada, waxaa sanadihii u dambeeyay jiray mad madow u dhaxeeyay isaga iyo Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas oo dhowr arrimood ay isku diidanayaan.
C/xakiin Camey ayaa la sheegaa inuu xiriir dhow la leeyahay Madaxtooyada Soomaaliya, isagoo taageersanaa siyaasadda dowladda Federaalka, mar walbana ka soo horjeeday dhaq dhaqaaqyada maamul goboleedyada wadeen.